ရွာအလှူတော် အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ရွာအလှူတော် အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ ….
ရွာအလှူတော် အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ ….
Posted by weiwei on May 1, 2012 in My Dear Diary, Myanmar Gazette, Photography, Travel | 64 comments
wei's photos ရွာအလှူ
ယနေ့ ပန်းတနော်မြို့နယ် အစုကြီးကျေးရွာတွင်တည်ရှိသော သီတဂူ သုမေဓါဆေးရုံသို့ ရွာသူားများ စုပေါင်းအလှူသွားရောက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မနက် ၆ နာရီခွဲ ရန်ကုန်မှ ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီး ပန်းတနော်သို့ ၈ နာရီခွဲမှာရောက်ခဲ့ကြတယ်။ ကားပေါ်မှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မိတ်ဆက်ကြရင်း၊ သူကြီးပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ကိုလဲ မဲဖောက်ကြရင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာခရီးနှင်ခဲ့ကြပါတယ်။ တံတားဦးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မနက်စာ ပန်းတနော်မုန့်ဟင်းခါးစားကြပြီး ပန်းတနော်မြို့ထဲမှာတည်ရှိတဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးကြတယ်။ ပြီးတော့မှ အစုကြီးကျေးရွာကို ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆေးရုံကို ၁၁ နာရီအချိန်ခန့်မှာ ရောက်ရှိခဲ့ကြတယ် ..
မြတောင်ဆရာတော်နဲ့တကွ ရွာသူရွာသားတွေက ကြိုဆိုနေကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံးကို ဧည့်ခန်းတစ်ခန်းထဲကို ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ခဏနားနေခိုင်းပါတယ်။ စားသောက်စရာ မုန့်မျိုးစုံနဲ့ ရေခဲစိမ်ထားတဲ့ ရေသန့်ဗူးများဖြင့် ဧည့်ခံကြပါတယ်။
ဆရာတော်နှင့် အလှူအစီအစဉ်ဆွေးနွေးကြပြီးနောက် ဆေးရုံကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် နေ့လည်စာနဲ့တည်ခင်းဧည့်ခံတယ်။
ရွာလုံးကျွတ်လုပ်အားပေးပြီး သေချာပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားပါတယ်။ နေ့လည်စာစားပြီးတော့မှ အလှူငွေပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆေးရုံအတွက် စုစုပေါင်းအလှူငွေ ကျပ် သိန်း ၅၀ နှင့် မြတောင်ကျောင်းနှင့် တံတားဦးကျောင်းအတွက် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့ခင်း ၁ နာရီခန့်မှာ အလှူအတွက် ရေစက်ချ အမျှပေးဝေခဲ့ပြီးနောက် စုပေါင်းဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ထို့နောက် ပန်းတနော်မြို့ကို ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အပြန်ခရီးမှာ မိုးရွာတဲ့အတွက် အေးချမ်းတဲ့ခရီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်းတနော်မှာ နံမည်ကြီး ပန်းတနော်ဖျာတွေဝယ်ခဲ့ကြပြီးမှ ရန်ကုန်ကို ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။
အန်တီမမက လှိုင်သာယာမှာ ညနေစာစားဖို့ စားသောက်ဆိုင်မှာ ကြိုတင်မှာထားပါတယ်။ ညနေ ၅ နာရီခွဲလောက်မှာ လှိုင်သာယာကိုရောက်ခဲ့ပြီး ညနေစာ စားသောက်ပြီးမှ အားလုံးလမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်။
ဒီနေ့တစ်နေ့တာ မနက်စာကနေ ညနေစာအထိ စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ အန်တီမမနဲ့ ကား၊ ရေသန့်၊ အအေးနဲ့ လိုအပ်တာအားလုံးအတွက် လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ အလှူရှင်များကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယနေ့အလှူကတော့ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ စုပေါင်းအလှူဖြစ်တာကြောင့် ရွာသူားများနဲ့ ရှေးရေစက်တော်တော်ရှိခဲ့လို့သာ ယခုလို စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အလှူပြီးမြောက်မှုအတွက် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရင်း၊ ခရီးစဉ်အတွက် ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာဖြင့် အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ရပါကြောင်း …
ဓါတ်ပုံတင်ရတာ အရမ်းခက်နေတာကြောင့် ဒါလောက်ပဲ တင်ပေးနိုင်ပါတယ် …
နောက်နေ့မှပဲ နောက်ထပ် ဓါတ်ပုံဆရာတွေဆီကနေ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါ ..
ဓါတ်ပုံဆြာကြီးများ ရွာသူား ပုံတွေကို အမြန်တင်ပါဗျို့….
အလှုအတွက် အားလုံးနဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ခံစားမိပါတယ်…
ခရီး သွားနေတာမို့ မလိုက်ဖြစ်ပေမဲ့ သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျား….။
သြော် အလှူကြောင်းထဲလဲ နီနေကြပါလားနော်…………ဘယ်သူများလဲ ဒန့်တန်.. သိချင်တယ် သိချင်တယ် ငါလေအိုးဟို့
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။
နောက်ထပ်လည်း လှူနိုင်တန်းနိုင် ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် ခင်ဗျာ။
တကယ် ပျော်ဖို့ ကောင်းခဲ့ပါတယ်။
ကားငှားတဲ့ ကိစ္စမှာ ဆူး တို့ ၂သိန်း၁သောင်း၅ထောင် တန် ကို ၂သိန်း၃သောင်းနဲ့ပေးပြီး ငှားခဲ့ရလို့ အညာမိတာ ကားမြင်မှ သိခဲ့ရလို့ စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အလှူ အတွက် အပျော်တွေက အားလုံးကို အရည်ပျော်အောင် ဖျော်ချ လိုက်သလိုပါပဲ။
ဘာမှ ကို စိတ်ထဲမှာ မရှိတော့ဘူး။
အဆိုတော် အဖွဲ့ကလည်း အပူဒဏ်ကို အံတုပြီး သူတို့လည်း ခြေညောင်းအောင် ပျော်ခဲ့ ရရှာတယ်။
အားလုံးပဲ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နဲ့ ပြီးသွားလို့ တကယ်ကို ၀မ်းမြောက်ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်။
ဒါနလေးဘာလေး မပြုချင်ဘူးလား ကိုဆူး
ခြေထောက်နာလို့ ….ဟင့်ဟင့် သနားပါတယ်…
သူကြီးနဲ့ဦးဆောင်သူများအား လေးစားလျှက် (သာဓု)3ပါဗျာ
ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ ကိုပြန်မြင်ယောင်မိပြီး ဗိုက်ဆာဆာလာတယ် မဝေ။ အဲဒီတုန်း ကမုန့် အစားလွန်သွားတာ။ ထမင်း နှစ်လုတ်ပဲစားနိုင်တယ်။ အခုမှာ မြင်ယောင်မိပြီး ငါးဟင်းနဲ့ ငါးပိရည်လေး ဆွဲချင်လာတယ်။ ဂွီဂွီဂွီ ဗိုက်ဆာသံ (ဗိုက်ထဲက ပိုးမျိုးရှစ်ဆယ် အော်နေပြီ) :D
အဲဒီတုန်းက အဆာပြေ စားဖို့ ချကျွေးတဲ့ မုန့် က တော်တော် စားကောင်းတယ်။
မုန့်ကြွေဆွမ်းဆိုလား.. အရမ်းကြွပ်တာပဲ.. အရသာ သိပ်ရှိလို့ အများကြီး စားခဲ့တယ်။
ပြည်တွင်းမှာ ယခုလိုပွဲမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နယ်ကလူတွေလာချင်ပါတယ်။ မီးကပျက်၊ ကွန်နရှင်းက မကောင်းတော့ အဆက်ပြတ်သွားတာ..၊ နာပါတယ်ခင်ဗျာ..။